तपाई हाईड्रोको सेयर लिन इच्छुक हो? अब प्रत्येक नेपालीलाई सरकारले एक लाखको सेयर दिने — Arthatantra.com
Arthatantra.com > उर्जा > तपाई हाईड्रोको सेयर लिन इच्छुक हो? अब प्रत्येक नेपालीलाई सरकारले एक लाखको सेयर दिने
तपाई हाईड्रोको सेयर लिन इच्छुक हो? अब प्रत्येक नेपालीलाई सरकारले एक लाखको सेयर दिने
काठमाडौ। ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी पाँच वर्षभित्र हरेक नेपालीलाई रु एक लाख बराबरको सेयर प्रदान गर्ने गरी कार्ययोजना बनिरहेको बताएका छन् । मन्त्री शर्माले पैसा लगानी गर्न सक्नेलाई लगानीका लागि आग्रह गर्ने र लगानी गर्न नसक्नेलाई श्रममार्फत सेयर दिने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।
त्यसको कार्ययोजना बनिरहेको छ । पहिलो चरणमा कर्णालीका जनतालाई रु एक लाखको सेयर प्रदान गरिने छ र क्रमशः सबैलाई सेयर प्रदान गर्ने गरी कार्ययोजना बनिरहेको छ ।” उनले भने ।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ योजनानुसार नै मुलुकभित्रैको साधन र स्रोत जुटाएर आगामी सात वर्षभित्र २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउँदै मन्त्री शर्माले सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट भएका प्रयास र प्रयत्नले उक्त सफलता हासिल गरिने बताए ।
‘नियमित विद्युत् आपूर्तिले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव’ विषयमा मन्त्रालयमा भएको अन्तक्र्रियामा ऊर्जामन्त्री शर्माले नियमित रुपमा जनतालाई विद्युत् सेवा दिने विषयमा सरकारले प्रस्ट योजनाका साथ काम अगाडि बढाएको तथा माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाएकाले सफलता हासिल भएको बताए । उनले भने“२५ वर्षपछि ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुनु सामान्य विषय होइन, हामीले चाह्यौँ भने धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास पैदा भएको छ ।”
मुलुकमा विद्युत्भार कसरी अन्त्य भयो, के छ यसमा जादु, लामो समयदेखि धेरैको मनका यही प्रश्न छ तर उत्तर सर्वसाधारणले सहज रुपमा पाएका छैनन् ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मुलुकभित्रका ठूला जलविद्युत् आयोजना साँझमा मात्रै चलाइएको तथा भारतबाट गत वर्षभन्दा ४५ मेगावाट मात्रै विद्युत् आयात गरेर आन्तरिक व्यवस्थापन गर्दा नै ठूलो उपलब्धि हासिल भएको बताए । प्राधिकरणले गत साउनदेखि हालसम्म चार प्रतिशत विद्युत् चुहावट घटाएको, पूर्ण क्षमतामा आयोजना सञ्चालनमा ल्याइएका कारण पनि काम गर्न सहज भएको उनले स्पष्ट पारे ।
२०७४ वैशाख ५ गते ११:२३ मा प्रकाशित
उम्मेदवार हुनकै लागि रिकुदेवीले किन गरिन पतिसंग 'डिभोर्स' !
संस्थागत विद्यालयको शुल्क कम्तिमा १,१८० र बढीमा ३,६७० निर्धारण,अरिरिक्त शुल्क लिएमा कडा कारबाही !
शुक्रबारबाट सुरु भएको जुत्ता मेलामा ग्राहकहरुको उत्साहजनक सहभागीता
नगरपालिकाको बिनियोजित बजेट रु ७४ करोड ।